Robot mbụ na-azụ Robot na Australia - RayHaber
HomeỤWAOceania61 AustraliaRobot nke mbụ na-azụ Robot na Australia
05 / 01 / 2019 Levent Elmastaş 61 Australia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Oceania 0
akpa ụgbọ oloko dunyanin na Australia
N'Istrelia, otu ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ na ígwè, Rio Tinto, kwalitere ụzọ ụgbọ okporo ígwè zuru ezu na ọdụ ụgbọ okporo ígwè kasị ukwuu n'ụwa.
Uzo okporo uzo di na Pilbara, Western Australia, nwere ihe dika 800 kilomita. Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ njem nke otu awa, gụnyere ibudata na ibudata ibu. Onye na-ekwuchitere ụlọ ọrụ ahụ kwuru na usoro a bụ nke mbụ n'ụwa.
Ụzọ a, ọrụ mbụ nke ụwa na-arụ ọrụ dị arọ nke na-arụ ọrụ dị arọ nke ụwa, bụ nke dị elu nke oru 940 nde dollar. A na-eji ụgbọ mmiri na-ejide onwe ya n'ụzọ zuru ezu maka ịkwado ụgbọ mmiri na-ebute n'ọdụ ụgbọ mmiri.
A ga-ahụ nkà na ụzụ na-akwọ ụgbọala n'ọtụtụ ebe n'ọdịnihu. Ụgbọ ala ndị na-akwọ ụgbọala bụ otu n'ime teknụzụ a ma ama. Site n'inwekwu mmepe nke nkà na ụzụ a, a pụrụ ịhụ ụgbọ ala dịgasị iche iche dị ka ụgbọ mmiri na-akwọ ụgbọala na ụgbọelu na-adọkpụ.
Ndị ọrụ Tüduşaşlı mepụtara robot welding automation 20 / 08 / 2015 Tüdemsaşl ọrụ mepụtakwara a robot ịgbado ọkụ ọkara akpaaka: Turkey Railway Industry (TÜDEMSAŞ) Ibrahim Alkan arụ ọrụ dị ka a welder, ọnụ na-arụ ọrụ ha na-eme na ihe isi ike n'ihi na ndị ọrụ ibe, anọ obere oru na ọkara akpaaka iji kpochapụ njehie nke nwere ike ime n'oge ịgbado ọkụ mepụtakwara a ịgbado ọkụ robot . TÜDEMSAŞ Metal Works Factory Manufacturing Branch bompa lụrụ di na nwunye na-arụ ọrụ 3 nna Ibrahim Alkan, na enyi TÜDEMSAŞ General Manager Yildiray ọkara akpaaka na-akwado ndị Koçarslan mepụtakwara a ịgbado ọkụ robot. Alkan na ndị enyi ya na-achọ iji wepụ mmetụta ọjọọ nke gas na-akpata ndụ mmadụ,
Ansaldo nwetara akara aka na akara ụgbọ okporo ígwè na US na Australia 11 / 04 / 2012 Ansaldo STS meriri 81.7 nde euro maka ikuku ụgbọ okporo ígwè na akara aka na US na Australia. Ansaldo STS abanyela na nkwekọrịta ya na Southwest Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) maka € 73.4m maka ntinye usoro nchịkwa ụgbọ oloko ọgụgụ (PTC) iji mee ihe na mpaghara okporo ígwè SEPTA na mpaghara ise na Philadelphia. N'Istrelia, Ansaldo bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nke mgbaàmà na nke ụgbọ okporo ígwè maka 7.8m maka ọrụ mmepe ụgbọ mmiri nke Hunter-New South Wales-Ravensworth Mine Complex. Isi: Raillynews
Australian nnochite High Speed ​​Okporo ígwè System na Turkey Beautiful Model N'ihi Anyị 28 / 03 / 2013 Australian nnochite High Speed ​​Okporo ígwè System Anyị Mara Mma Model Australia si nnochite anya na Ankara na Turkey Biggs na Eskisehir: "High Speed ​​Okporo ígwè System na Turkey, Good Model Maka Ya mere, ana m asị m enyi na Australian Ministry of Foreign Affairs, e nwere mgbe niile bụrụ na anyị ka na-atụ aro ka Turkey. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere iji nweta ha aro. Australian nnochite anya Ian Biggs, na Turkey High ọsọ Train (YHT) kwuru na ọ bụ a ezi ihe nlereanya ka ha na usoro. dị ka a na nkwupụta si gọvanọ ọrụ, nnochite anya Biggs, Eskisehir N'okwu ya, Biggs gara ileta ihe nkiri a ma ama nke Australia n'ogologo
Australia, 40 ga - arịọ mgbaghara maka ọdachi ụgbọ mmiri Granville nke gara aga 16 / 01 / 2017 Australia, 40 ịrịọ mgbaghara maka ụgbọ mmiri Granville ụgbọ mmiri ahụ mere n'afọ gara aga: State of New South Wales (NSW) ga-arịọ mgbaghara maka ezinụlọ ndị ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ na ụgbọ mmiri Granville mgbe 40 gasịrị. 18 January N'ime ihe ọjọọ a mere na 1977, ụgbọ okporo ígwè ahụ na-agbanye okporo ụzọ ndị dị nso na ọdụ ụgbọ oloko Granville na ndagwurugwu ahụ daa n'ụgbọala; Egburu 83 na ndị mmadụ gburu 213. Onye njem ụgbọ njem bụ Andrew Constance kwuru okwu maka ABC na ịrịọ mgbaghara maka ndị metụtara. Herkes Onye ọ bụla na-ewe oké iwe banyere nke a, ka Constance kwuru. Boyunca N'ime afọ ndị gafeworonụ, mba anyị anọwo na-emeso otu n'ime ọdachi ndị kasị njọ n'akụkọ ihe mere eme ya. "
2012 Australia Ahịa - Melbourne 26 / 04 / 2012 A ga - eme 2012 ngosi okporo ụzọ okporo ámá na Melbourne, Australia n'etiti 08 / 05 / 2012 - 09 / 05 / 2012. Maka nkọwa zuru ezu banyere mma, biko pịa ebe a
Western Australia Transport Mbubata 2012 - Perth 19 / 06 / 2012 21-22 2012, nke a ga-enwe n'agbata August na 9. Western Australia Transport A ga-enwe nzukọ 2012 na Perth, Australia iji nye ọganihu ụlọ ọrụ iji zụlite ngwa ahịa mbupụ na ịmepụta echiche ọhụrụ maka ọrụ ụgbọ njem na atụmatụ Nsanaazụ nke WA. Maka ozi ndị ọzọ banyere nzukọ biko pịa ebe a Isi: Raillynews
Ansaldo STS na-enweta nkwekọrịta maka ịbanye ụgbọ okporo ígwè n'Australia 16 / 11 / 2012 Ansaldo STS nwetara mmetụ maka ntinye nke usoro ntinye maka ntinye nke 14.7 nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè Perth, nke 17.900.000 (A 7,5 $), nke PTA si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Australia malitere. Ansaldo STS malitere akara na imewe maka mgbatị ọhụrụ ahụ. Ansaldo STS ga-etinyekwa teknụzụ Nchebe Akpaaka. A na-atụ anya ka a rụchaa ọrụ ahụ n'ihe gbasara afọ 2. Isi: Raillynews
Ọrụ ụgbọ okporo ígwè nke ndị isi ala n'Australia weghachitere ọnwa isii 22 / 11 / 2012 Ihe oru $ 1,1 billion nke iron ígwè nke ụgbọ ala na QR National, Atlas Iron na Brockman Mining na Pilbara, Australia nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, n'ihi ụba a na-akwụ ụgwọ, ụgwọ ahịa ígwè ígwè na enweghị mgbagwoju anya banyere ego ndị ụlọ ọrụ ahụ ga-ebu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ekwuputara na ha weghachite rue mgbe. Ígwè Iron Atlas kwetara na QR National, ụlọ ọrụ ụgbọ njem mpaghara, iji mee nchọpụta gbasara ọmụmụ ígwè ụgbọ okporo ígwè ígwè. A na-atụ anya ka arụ ọrụ ahụ na njedebe nke afọ a, a na-atụ anya na iwu ga-akwụsị na 3,5. Isi: SteelOrbis
Ọchịagha Ọchịchị Australia na-eleta TCDD 21 / 08 / 2014 Australian nnọchianya General na Istanbul TCDD Nleta: Lino STRANGIS Australian nnọchianya General na Istanbul, on August 14 2014 TCDD Deputy Director General Deputy Adam belt gara ọchịchị. Eriri, Australian nnọchianya General na Istanbul strangıs site na-ekwupụta ya afọ ojuju n'ihi na ịnabata TCDD, kwuru na ya hụrụ nke a nleta dị ka a nzọụkwụ mbụ kwupụta rụọ ụgbọ okporo mmekọahụ n'etiti mba abụọ. Nnọchianya General STRANGIS, rụrụ ọrụ na ubi nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Turkey anya ha soro na kwuru na ha na ọchịchọ na-ewusi mkparịta ụka n'etiti mba abụọ ahụ, ọnọdụ nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Australia ma nye ụfọdụ pụtara ọmụma banyere ndị na na ụgbọ okporo ígwè na ubi. Onye isi ụlọ, n'etiti 23-26 September 2014 os
Onye Nnochite anya Australian gara TCDD 24 / 12 / 2014 Onye nnochite anya nke Australian gara leta TCDD: Onye nnọchiteanya Australia na Ankara James Larsen gara TCDD General Manager Süleyman Karaman n'ọfịs ya. Turkey na-atụle ihe ndị pụrụ imekọ ihe ọnụ ohere na ubi nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè gafee Australia na a oge Larsen ekwupụta ya ụtọ ịnabata gị TCDD Karaman, ha na-ọkachamara nke mba abụọ ụgbọ okporo ígwè ga-imekota dị iche iche ebe na kwuru na ọ chọrọ ka a mere na-ekere òkè anyị kwadoro na ogbako a ga-enwe. Karaman, ma o kwuru na ọ bụ nzọụkwụ mbụ a ga-kwupụta nkwado a kpọrọ Turkey iji kere òkè ọmụma na ahụmahụ nke otu ọkachamara si Australia bụ ekwe omume. Onye nnochite anya Larsen, onye isi obodo Karaman'i 4-5 March 2015 Büyükel
Ndị ọrụ Tüduşaşlı mepụtara robot welding automation
Ansaldo nwetara akara aka na akara ụgbọ okporo ígwè na US na Australia
2012 Australia Ahịa - Melbourne
Western Australia Transport Mbubata 2012 - Perth
Ọchịagha Ọchịchị Australia na-eleta TCDD
Onye Nnochite anya Australian gara TCDD